एमाले अढाइ करोड नाफामा, कांग्रेस तीन करोड र माओवादी २६ लाख ऋण ! « Khasokhas Follow @khasokhasmag
एमाले अढाइ करोड नाफामा, कांग्रेस तीन करोड र माओवादी २६ लाख ऋण !
प्रकाशित मिति : माघ २८, २०७३ शुक्रबार
निर्वाचन आयोगमा ११२ दल दर्ता छन् । तर, ८६ दलले मात्र आर्थिक वर्ष ०७२-७३ को आयव्यय विवरण बुझाएका छन् । दर्ता भएकामध्ये २६ दलले आयव्यय विवरण समयमा बुझाएनन् । विवरण बुझाएकामध्ये थोरै दलले मात्रै ऋण रहेको देखाएका छन् ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका, तर जनताबीच कमजोर संगत रहेका साना दलले खर्च भने ठूलो देखिएका छन् । जनप्रजातान्त्रिक पार्टी नेपालले ७ लाख ४८ हजार ३ सय आम्दानी गरेको छ । तर, ३१ हजार ७ सय ऋण देखाएको लोक दलले ६ लाख ६० हजार ९ सय आम्दानी गरेकोमा ८० हजार ऋण देखाएको छ ।
नेपाल आमा पार्टीले ८ लाख २१ हजार आम्दानी गरेको देखाएको छ, तर खर्च पनि त्यति नै रकम देखाएको छ । देशभक्त समाजले ५ लाख ७२ हजार आम्दानी गरेकोमा ५ लाख ६१ हजार खर्च देखाएको छ ।
निर्वाचन आयोगमा आयव्यय विवरण बुझाएको नेपाल जनता पार्टीले ५९ रुपैयाँ २५ पैसा ऋण रहेको देखाएको छ । आम्दानी भने ४२ हजार रुपैयाँ मात्र भएको सो पार्टीको विवरण छ । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले पनि ४ लाख ८५ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ आम्दानी भएको, तर ८ सय ५ रुपैयाँ ऋण लागेको देखाएको छ ।
युवा शक्ति नेपाल पार्टीले २ लाख ४४ हजार १ सय रुपैयाँ आम्दानी भएको, तर खर्चमा ६ सय रुपैयाँ ऋण रहेको उल्लेख गरेको छ । तामाङसालिङ राष्ट्रिय जनएकता पार्टीलाई पनि ५ सय रुपैयाँ ऋण लागेको छ । सो पार्टीले १ लाख ६७ हजार ३ सय रुपैयाँ आम्दानी गरेको विवरण छ ।
दलको विवरण अध्ययन गर्दै आयोग
निर्वाचन आयोगले पुस मसान्तभित्र दलहरूबाट प्राप्त आय–व्यय विवरण अध्ययन गरिरहेको छ । आयोग कुन दलले कति रकम वार्षिक रूपमा कारोबार गरेका छन् भन्ने अध्ययनमा छ । आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले आयव्यय विवरण अध्ययनकै क्रममा रहेकाले विस्तृत जानकारी दिन नसकिने बताए । याेगेस भट्टराई/नयाँ पत्रिका